samedi, 04 avril 2020 08:48
Fiatrehana ny Covid-19: Hisesy ny fihaonan’ny filoha amin’ireo filohan’ny Andrimpanjakana sy ny filoham-piangonana
Hanao tombana ny fanjakana taorian’ny roa herinandro nampiharana ireo fepetra amin’ny Hamehana ara-pahasalamana hifehezana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara. Hisy ny filankevitry ny minisitra amin’ity sabotsy 4 aprily ity, araka ny nambaran’ny filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina omaly. Hihaona indray amin’ireo filohan’ny Andrimpanjakana ity farany, handray ireo filoham-piangonana. Haka ny hevitr’ireo manampahaizana amin’ny fitsaboahana ihany koa manoloana ny fiatrehana ity valanaretina ity, mialoha ny handraisana fanapahan-kevitra ny amin’ny tohin’ny fifehezana ny fihanak’io coronavirus io. Miisa 70 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus hatry ny omaly 3 aprily 2020, eto Antananarivo ny 56 amin’ireo, samy ahitana olona misy ny tsimokaretina coronavirus 6 avy i Toamasina sy Fianarantsoa, 1 avy ao Antsiranana sy Morondava.
vendredi, 03 avril 2020 18:11
Rivo Rakotovao: Nangataka fihaonana amin’ny filoha Andry Rajoelina
Nitafa fohy tamin’ny mpanao gazety ny filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao androany zoma 03 aprily 2020. Nandritra izany no nanaovany fanentanana sy fampirisihana ny vahoaka Malagasy hanaraka antsakany sy andavany ny torohevitra efa napetraky ny Fanjakana mba hoentina hiadiana amin’ny COVID-19. Nangataka fihaonana amin’ny Filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina, nataony amin’ny anaran’ny Antenimierandoholona sy ny Loholona rehetra, Atoa Rivo Rakotovao « mba ahafahana mifampandinika amin’ny fitsinjovana ny ampitson’ny vahoaka Malagasy manoloana ny toe-javatra misy amin’izao fotoana izao ».
mercredi, 01 avril 2020 20:10
Ny Rado Rafalimanana: Notanana ao amin'ny Brigade de recherche Fiadanana
Taorian'ny fisamborana an'i Ny Rado Rafalimanana teny amin'ny CCI Ivato, rehefa naharay fitarainana avy amin'ny Polisy mpiambina ny sisintany sy ireo miandraikitra ny fitiliana teny amin'ny CCI ny Zandarimaria androany maraina, fa manakorontana eny ity Kandida ho filoham-pirenena teo aloha ity, dia natao ny fanadiadiana. Misy ihany koa fitoriana azy teo aloha nataon'ny Kolonely iray momba resaka fisolokiana, fa noho ity resaka coronavirus ity dia nahantona aloha ny fanenjehana azy. Fa izy efa voasambotra izao moa avy dia natao ny famotorana azy. Notanana eny amin'ny Brigade de recherche Fiadanana aloha izy fa mbola tsy vita ny fanadihadiana azy.
Nanao fanambarana ny antoko MONIMA tamin’ny alalan’ny Sekretera jeneralin’ny antoko, mampahafantatra ny « namana » rehetra fa « noho ny loza Covid-19 midona amin’ny firenena ka tena manahirana be ny 90 isan-jaton'ny Malagasy dia tsy afaka hanamarika ny 1 Aprily 1971 isika rahampitso ». Raha vao lefy kosa izao tranga misy izao, hoy hatrany ny fanambarana dia « ho tsaroantsika MONIMA amin’ny fomba mendrika sy miavaka ny Mahery Fon’ny 1 Aprily 1971 sy ny 31 Marsa 1992 ».
mardi, 31 mars 2020 08:56
Marc Ravalomanana: « Fitiliana, fitiliana, fitiliana » no hifehezana ny fihanaky ny coronavirus
Nandroso paik'ady hifehezana ny fihanaky ny coronavirus ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM), tarihin’i Marc Ravalomanana, filoham-pirenena teo aloha. Nambaran’ity farany fa mila omena fitaovana aloha ny vahoaka Malagasy ahafahany miaro ny tenany. Vahaolana ihany koa, ary nohamafisiny ny fanaovana « Fitiliana, fitiliana, fitiliana », raha nitafa tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny trano fonenany teny Faravohitra izy ny alatsinainy maraina 30 marsa, notronin’i Randriamasinoro Tahiry Ny Rina, Sekretera jeneralin’ny antoko TIM sy solombavambahoaka TIM vitsivitsy. Nambarany fa vonona hitondra ny anjara birikiny ny TIM hiadiana amin’ity valanaretina coronavirus ity ho tombotsoan'ny Vahoaka. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 31 mars 2020 08:33
Coronavirus: Hanenjika fitiliana 1 000 isan’andro i Madagasikara
150 ka hatramin’ny 200 ankehitriny ny fitiliana vita eo anivon’ny Institut Pasteur de Madagascar na IPM izay manana ny foiben-toerany etsy Avaradoha Antananarivo. Hanenjika fitiliana 1 000 isan’andro i Madagasikara hifehezana haingana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus, araka ny nambaran’ny filoha Andry Rajoelina tao amin’ny Televiziona Malagasy ny harivan’ny alatsinainy 30 marsa 2020. Nampahatsiahy ny filohan’ny Repoblika fa efa nisy ny fifampiresahany tamin’ny tomponandraikitra teo anivon’ny IPM nandritra ny fitsidihany teny an-toerana tamin’ny tolakandron’ny sabotsy 28 marsa 2020 teo, ny hizarana traikefa ka hanofanana ireo biôlôjista malagasy hahafahana mampitombo isa ny fitiliana atao sy manaparitaka izany any amin’ny toerana hafa.
lundi, 30 mars 2020 12:11
Coronavirus: Ampiasao sy atsarao ny ananana
Gasy tia mamorona zavatra hafa fa tsy mahay manamboatra na manatsara ny efa misy. Isika tsy mba manana finiavana anatsara ny misy fa tia mamoroporona zavatra amboniny foana. - Mangala-bato ny Ministeren'ny Aty tany, dia tsy misy manasazy, na manao izay ialan'ny politika ao anatin'ny fitantanana ny asam-panjakana, fa mamorona CENI, dia iny no vatsian'ny mpanam-bola mivantana fa tsy matoky ny fanjakana mpanao kolikoly sy mpanodikodim-bola. - Efa misy ny ministeran'ny tontolo iainana, dia mamorona ONE, dia iny no vatsiana vola. - Izao misy ny Coronavirus, dia mamorona ny CCO, centre de commandement opérationnel dia takona tanteraka ny ministeren'ny fahasalamana.
samedi, 28 mars 2020 21:39
Serasera: Nahazo taratasy fampitandremana ny Real TV
Araka ny Filazana ny hamehana ara-pahasalama eto amin'ny firenena dia efa nanaovan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina filazana ny Radio sy Televizionina Real TV sy Real FM ny andefa manontolo sy mivantana ny fandaharana avy amin'ny sampana fibaikona momba ny coronavirus na ny CCO, ary andefa ny fandaharana manokana "miara-manonja", nefa tsy nanao izany ny Real TV ny 26 sy 27 marsa 2020, mba hitsimbinana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminam-bahoaka amin'izao fotoanan'ny krizy izao. Ambonin'izany dia nanasa manokana ramatoa iray tamin'ny fandaharana "invité du jour" ny 25 mars 2020, izay nitarika ny olona hankahala ny mpitondra ary miantso fikomiana.
Fanelezana vaovao tsy marina: Tranga 16 nanokafana fanadihadiana, olona iray nampidirina am-ponja
Mikaroka ireo olona manaparitaka vaovao tsy marina momba ity valanaretina coronavirus sy ireo mpanompa sy mpaniratsira olona amin’ny tambazotran-tserasera ny mpitandro ny filaminana. Efa misy ny vokatra. Tranga fito, hatramin’ny androany, no nanokafan’ny ministeran’ny filaminam-bahoaka fanadihadiana, ary efa hita ireo olona sasany tao ambadik’izany. Efa vita famotorana ny efatra tamin’ireo ka nampidirina amponja vonjimaika ny iray, nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny telo. Mbola anaty fanadihadiana ny tranga telo ambiny.
jeudi, 26 mars 2020 13:12
Saram-pianarana: « Mifampiresaha dieny izao hifandaminana », hoy i Fetison Rakoto Andrianirina
Maro ny zavatra atrehina manoloana ity fihiboahana an-trano hisorohana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara ity. « Ho avy tsy ho ela ny fandoavana ireo saram-pianarana ho an'ireo Raiamandreny mampiana-janaka eny amin'ny sekoly tsy miankina. Aza miandry ny Fitondrana fa mifampiresaha dieny izao hifandaminana ny tompon-tsekoly - Mpampianatra - Raiaman-dReny ho fifampitsimbinana », hoy i Fetison Rakoto Andrianirina, filoha nasionalin’ny antoko RDS (Roso ho amin'ny Demokrasia Sosialy).